Iyo kirasi yekumhan'ara kupokana neApple yeiyo mifananidzo yeMacBook Pro 2011 yakatopindurwa makore manomwe gare gare | Ndinobva mac
Muna 2014, makore manomwe apfuura, takakuudza kuti vamwe vashandisi vakabatana uye vakamhan'arira kirasi yekumhan'arira Apple nehurombo uye mashandiro emaGPU muMacBook Pro 2011. Paive nekubwinya mune yavo GPU izvo zvakakonzera avo vakawirwa negrafiki glitch nguva nenguva mumushini wavo . Vamwe vashandisi vakachinja girafu nekubhadhara izvo zvinoshandiswa uye ndizvo zvavakataura makore mazhinji apfuura. Zvino ruramisiro yakapindura, zvirinani muCanada.
Apple yakauya ichichinja mamwe emakomputa aya kune akati wandei yeavo vakakanganiswa, asi zvishoma vashoma vashandisi vakabuda nedambudziko rakafanana. Mamiriro acho akazoita kusagadzikana uye vashandisi vazhinji vanga vatobhadhara izvo mari zvakakonzera shanduko yegirafu. Nekuti ndeyemweya vakasarudza kujoina uye faira kirasi yekuita mhosva kuitira kuti kambani ibhadhare mari.
Iye zvino muQuebec vanogona kuwana kudzoserwa kwekugadzirisa mushure mematare. Anoda kusvika makore manomwe, dare reCanada rakazobvuma kugadzirisa. Izvi zvinoguma zvave Apple inofanirwa kudzorera yakanganisa vatengi. Sezvakataurwa naPcMag, chibvumirano chakasimbiswa svondo rino neDare Repamusoro redunhu reQuebec. Inotaura kuti chero munhu akatenga 2011 15- uye 17-inch MacBook Pro ine AMD GPU uye anogara kuQuebec anokodzera kudzoserwa kune chero gadziridzo inoenderana yakabhadharwa kunze kwewarandi.
Mhosva iyi yakaratidza kuti vatengi vakamanikidzwa kubhadhara kusvika kumadhora mazana matanhatu ekugadzirisa. Chibvumirano chinotsanangura kuti varidzi veMacBook Pro 600 vakakanganiswa vanogona kuwana 175 madhora eCanada (angangoita ma120 euros), kune chero matambudziko avakange vainawo, pamwe nekubhadharwa kwakazara kweimwe mari yekugadzirisa.
Chibvumirano chinogona kuwanikwa kuburikidza ino webhusaiti , que ichavandudzwa mumazuva mashoma anotevera nemamwe mashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo kirasi yekumhan'ara mhosva inopokana neApple yemifananidzo yeMacBook Pro 2011 yakatopindurwa makore manomwe apfuura